Kubizwa umhlangano wabePirates | isiZulu
Kubizwa umhlangano wabePirates
Kubatshazwa ubuhlakani kumqeqeshi wePirates
UMBONO:'Akanikezwe ithuba umqeqeshi omusha wePirates'
Durban – Uhlela umhlangano nabadlali be-Orlando Pirates abashaya into ephansi uKjell Jonevret ongumqeqeshi omusha wale kilabhu ezobhekana neKaizer Chiefs kowezinkani zababili ngoMgqibelo.
UJonevret uzwakalise lokhu emuva kokuba ebone okokuqala ensimini abadlali bePirates ngesikhathi ishayana ize ibukana nePolokwane City kuba ngu-1-1 kowe-Absa Premiership ngoMgqibelo ntambama, e-Orlando Stadium, kubika ILANGA.
IPolokwane yiyo evule inkundla ngegoli likaRodney Ramagalela kodwa lacinywa ngelikaDove Wome.
UJonevret oqokwe ngeledlule njengomqeqeshi omusha weBucs, ubehleli okokuqala ebhentshini lale kilabhu kulo mdlalo, kanti kowesibili uzoyiqhuba esebhekene neChiefs ebambane ngo-1-1 ne-Ajax Cape Town ngoMgqibelo ebusuku.
OLUNYE UDABA: Kubatshazwa ubuhlakani kumqeqeshi wePirates
UJonevret uthi kukhona abadlali abamchazile emdlalweni wePolokwane kodwa kukhona azocela ukubabona eceleni ngokuqala kwaleli sonto ukuze abayale bakhuphule amasokisi.
“Nakuba bekungumdlalo wami wokuqala lona kodwa bakhona abadlali abangichazile bese kuzoba khona okufanele ngikhulume nabo engxenye ngoba kabangigcilisanga.
“Kulo mdlalongibone abadlali abangu-14, ngokuhamba kwesikhathi ngizobona abanye. Bekuyisonto lami lokuqala ngifikile, okwamanje ngisabuka nje, emasontweni ambalwa ezayo lizokube seligaya ngomunye umhlathi,” kusho lo mqeqeshi odabuka eSweden.
Uqhube ngokuthi ugculisekile yindlela ezakhe ezidlale ngayo emuva. Uncome u-Abbubaker Moraba odedlala esiswini wathi ukhombisa okukhulu ukuvuthwa.